FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA GOAVAMBE SCHNOODLE - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika goavambe Schnoodle
Alika goavam-be mifangaro Giant Schnauzer / Standard Poodle
Dax the Giant Schnoodle amin'ny taona 1 miaraka amin'i Auggie the Giant Schnoodle puppy
glider zaza siramamy ao anaty paosy
Ny Giant Schnoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Giant Schnauzer ary ny Poodle mahazatra . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Fako alika kely Giant Schnoodle
Auggie the Giant Schnoodle alika kely
Moose ilay mainty Giant Schnoodle amin'ny faha-4 taonany ary vita fohy ny palitaony— 'Moose dia tsara loatra ary tamin'ny taona 1 dia nahavita ny trondro izy ary azo atokisana amin'ny trano sy tokotany malalaka. Tena tsy mivadika izy ary miaro tanteraka ny fianakaviako ka mahagaga ahy izany. Mamy fotsiny izy izao ary milamina tsara. Afa-po tanteraka amin'ny torimaso tontolo andro sy alina izy ary mandehandeha eran'ny trano fotsiny. Tsy nisy olona nifanena taminy nankahala azy. Mifankahazo tsara amin'ny zanaky ny mpifanila trano amiko (zaza vao teraka ka hatramin'ny 6 taona) sy ny saka ataonay. Miavaka fotsiny izy. Tsy afaka manomboka milaza ny fahafaham-poko aho aminy. '
Moose ilay mainty Giant Schnoodle tamin'ny faha-4 taonany niaraka tamin'ny palitaony nitombo lava, nandry teo am-pandriana
st. bernard alemanina mpiandry mix
Moose ilay mainty Giant Schnoodle amin'ny 10 volana nipetraka teo amin'ny sofa
Moose ilay mainty Giant Schnoodle amin'ny 10 volana
Moose the Giant Schnoodle puppy amin'ny 5 volana— 'Izaho dia 5'8' ary rehefa mijoro amin'ny tongotra 4 izy, ny sorony dia hatreny amin'ny lohaliko (1.5 metatra eo ho eo) ary rehefa eo amin'ny tongony aoriana dia tafakatra teo ambonin'ny valahako ny tongony (3,5 metatra eo ho eo). Mavitrika tokoa izy ary mihazakazaka manodidina ny trano isan-kariva amin'ny 9 ora. Tsy manana olana amin'izany aho satria nanana Poodle mahazatra izahay taloha. Tena faly taminy aho. Mianatra haingana izy ary dodona foana hampifaly ahy. Tena mihaino tsara izy. Tsara manodidina ny soavaliko izy. Nahafantatra ilay baiko hoe ‘mipetraha’ izy afaka 2 andro taorian'ny nahatongavany tao an-trano. Nampifanintontsintona azy izahay tamin'ny taona 3. Heveriko fa tena tsara izany raha jerena fa 2 volana izy tamin'izy nahazo azy. Milamina haingana izy amin'ny alina ary matory avy hatrany. Manoro hevitra Giant Schnoodle ho an'izay rehetra miaina fomba fiaina somary mavitrika aho. Moose no anarany. Fantany koa fa 'avelao', 'mijanona', 'midina' ary 'TSIA.' '
Alika kely mpanao ady totohondry 8 volana
Moose the Giant Schnoodle ho alika kely amin'ny 5 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny Giant Schnoodle
Sary goavambe Schnoodle 1
Lisitry ny alika mitambatra mahazatra Poodle
Lisitry ny alika goavambe mifangaro Giant Schnauzer
firy taona ny zaza no tokony homena alika ao anaty trano
siberian husky great dane mix
amerikana eskimo border collie mix
ahoana no hilazana raha misy «heeler manga» no madio
chihuahua rat terrier mix size
fifangaroan'ny alika newfoundland sy labrador
alika miteraka tongotra nivadika